Akhriso Xog Ciidan Caburin loogu Talagalay Noogu Tababareysa Erateriya. | SMC
Home WARARKA MAANTA Akhriso Xog Ciidan Caburin loogu Talagalay Noogu Tababareysa Erateriya.
Akhriso Xog Ciidan Caburin loogu Talagalay Noogu Tababareysa Erateriya.
Waxaa daabulid deg deg ah ay ka socotaa garoonka Ciidanka Cirka ee Afisyooni ee Mgaalada Muqdisho, waxana laga wadaa rarista ciidamo ay soo tababarayaan Yuhuudda laguna tababari doono dalka Erateriya. Ciidamadaas waxaa hadda lagu ururinayaa garoonka ciidanka Cirka ee Xamar. Waxaana si aan qarsaneyn loog Wadaa daabulidooda. Garoonka waxa fadhida dayuurad sumad la’aan ah oo ah kuwa xamuulka oo lagu daldalayo ciidankaas .
MW Farmajo ayuu Afawerki oo la kaashanaya Abiy Ahmed u ballanqaaday inuu u dhisi doono ciidan sidii Guulwadayaashii ah oo wax caburiya Isla markaana wax dili kara. Qeybihii u horreeyey ciidankaas ayaa hadda hawshooda xoog u bilaabatay.
Ciidankaan waxaa laga soo ururiyey Maamul goboleedyada Jubaland gaar haan Gedo iyo Puntland, gaar ahaan degaanka Buuhoodle waxaana loogu talagalay inay marka la keeno ee uu tababarka u soo dhamaado loo qeybiyo gobollada Jubbaland, Puntland iyo Banadir si ay Khalkhal uga ridaan degaannaadaas ka hor inta aan doorashada 2020/21 la gaarin.
Ciidankaan waa dhallinyaro yaryar oo hadda loo wado in masakaxda laga soo dhaqo si ay u noqdaan ciidan aan ka soo noqon wixii loo diro dil iyo dabargooyn middey tahay. Wararka aan hadda ka helayno Garoonka Aden Cadde qeybta ciidanka Cirka waxay sheegayaan in dayuuraddaas ay gashay dhowr duulimaad oo hore oo ay qaaday ciidan koox ah oo horaba ugu jira tababarkii degdegga ahaa ee loo rabay in la baro sida wax loo dilo.
Ciidamada Yuhuudda ayaa lagu yaqaannaa inay tababaraan ciidan manaxayaal ah oo aan xaq iyo xaqdarro toona ku dagaallamin, balsa dila ciidii ay arkaan sida aad ka aragteen shaashadaha marka ay joogaan dhulka reer Falastiin. Ciidankaa waxaa loo adeegsan donaa xaalado aan caadi ahayn oo la buuri doono, sida mudaaharaadyada iyo banaanbaxyada shacbiga, iyagoo habeenkiina kharijin iyo Khalkhal gelin sameyn doona.
MW Farmajo, Kheyre iyo Fahad ayaa hadda ku taamaya inay dalkaan xoog ku sii haystaan oo ay bilaabaan caburin iyo in qas iyo qalaanqal lagu abuuro maamul goboleedyada deggan si loo rido madaxda hadda joogta ee Axmed Madoobe iyo Siciid Deni, si looga dhigo sida Hirshabeelle oo aysan runtii wax dowlad ah ka jirin iyo Galmudug oo ruuxa uu ku sii daba yar yahay haddaanu dadkeeda badbaadsan.
Dhinaca kale waxaa Xamar ay ka wadaan Kheyre, Fahad iyo Farmajo sidii dadka Xamar loo hubin lahaa inaysan awood u yeelan inay ka dhiidhiyaan culeysyada kala daran ee lagu hayo inta ay Ciidankan dufcadda hore ka imaneyso, kadibna haddii ay madaxa kor u qaadaan loo adeegsan doona nooc kasta oo caburin ah.
Previous articleWARARKII MILATARIGA MAAYLAND IYO FEDERAALKA SOOMAALIYA
Next articleHeshiis la dhex-dhigay beelo ku dagaalamay Bakool